Gaalkacyo - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Gaalkacayo)
Magaalo in SoomaaliyaTemplate:SHORTDESC:Magaalo in Soomaaliya
Xirsi Yuusuf Barre
Galkacyo (Af carabi: جالكعيو) waa magaalo madaxda gobolka Mudug ee dalka Soomaaliya. Magaaladan waxay ku taala bartamaha Soomaaliya. Galkacyo (Galkacyo), Talyaani-guna wuxuu u yaqaanay Gallacaio ama Galcaio, waqtiyada gumeysiga. Sidoo kale Rocca Littorio,  waa caasimadda gobolka Mudug ee Soomaaliya. Waana magaalada seddexaad ee ugu baaxada wayn Soomaaliya.
Dagmada waxaa loo kala daganyahay Koonfur iyo Waqooyi oo ay kala maamulaan labada maamul ee Galmudug (Koonfur) iyo Puntland (Waqooyi).
Dhanka koonfurta waxaa ku yaal Airport oshaako ee la sameeyey 2012 iyo garoonka kubadda cagta ee Abdullahi Isse. Iyo koontaroolka ugu wayn Magaalada Halka dhanka waqooyi ku yaal Airportka ee abdullahi yuusuf airport, iyo garoonka kubadda cagta ee cawaale
Madax banaanidii kadib Magaalada gaalkacyo si aad ah ayey u koraysay waqtiyadii ugu dambeysay waxayna noqotay udub dhaxaadka ganacsi ee dalka
3 Qabiilada dagga
4 Dadka ugu caansan
5 Xaafadaha Gaalkaacyo
7 Linkiga Caddaynta
Tilmaamaha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Ka dib markii madax-bannaani ay qaadatay Soomaaliya sanadii 1960, Gaalkacyo waxaa laga dhigay caasimada gobolka mudug. 
Goobta Galkacyo waxay ku taallaa waqooyiga bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan bartamaha gobolka Mudug. Degmooyinka u dhow waxaa ka mid ah bariga Godad (7.1 nm), waqooyi bari: Bali Busle (16.2 nm), waqooyiga: Halobooqad (4.4 nm), waqooyi galbeed: Beyra (12.8 nm), galbeed :Xera Jaalaaley (23.8 nm ), dhinaca koonfureed: Saaxo (30 nm), koonfurta: Laascaalaale (10.2 nm), iyo dhinaca koonfureed: Arfuda (13.0 nm).   Magaalooyinka ugu waaweyn ee Galkacyo u dhow waa purtinlle, (290 km), Garoowe (219 km) iyo dhusamareeb (258 km).Xarardheere 300 km
Gaalkacyo waxay leedahay cimilo kulul. Heerkulkaugu kulul wuxuu dhacaa inta lagu jiro bilaha jiilaalka bisha 21 desembar illaa 21 maarso, marka akhrinta heerkulbeeggu wuxuu u dhexeeyaa 23 ilaa 25 ° C (73 ilaa 77 ° F). Cimiladu waxay si tartiib tartiib ah u qabataa guga, maaddaama xilli-roobaadka bisha April bilaabmaa. Heerkulka heerkulku wuxuu gaari karaa ugu badnaan qiyaastii 41 ° C xagaaga xagaaga. Kaalay Sebtembar, dabacsanaan tartiib tartiib ah ayaa bilaabmaysa mar kale.
Qabiilada dagga[wax ka badal | wax ka badal xogta]
 Waqooyiga gaalkacyo waxaa daga Leelkase, majeerteen 'Cumar-maxamuud, reer biciidyahan, Wagardhac, Amaanlle, Arab Saalax iyo Awrtable iyo Dir,
dhanka koonfurta galmudug waxaana daga Habar gidir Sacad , shiiqaal, iyo madhibaan, Qabiilka ugu badan ee daga gobalka mudug waa Majeerteen.
Gaalkacyo waxaa lagu qiyaasaa inay daganyihiin 545,000 oo qof.
GEN Mohammed Farah Aideed
Halyeey Abdullahi Isse
Gen. Mohamed Abshir
cornel Cabdulaahi Yuusuf Axmed -
GEN Ali kadiye.
GEN Abukar aftooje
Xaafadaha Gaalkaacyo[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Gaalkacyo waxaay ka kooban tahay 11 xaafadood oo kala ah:
Faahfaahin Cimilada Gaalkacyo
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro Galkacyo.
Template:EGN mohamed malabsey landhere
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaalkacyo&oldid=206592"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 20 Oktoobar 2020, marka ee eheed 06:08.